နှားနို့ထဲ ကွကျသှနျဖွူထညျ့ပွီး သောကျသုံးပေးခွငျးဖွငျ့ ရရှိလာမယျ့ အကြိုးကြေးဇူးမြား – Cele Lover
နှားနို့ထဲ ကွကျသှနျဖွူထညျ့ပွီး သောကျသုံးပေးခွငျးဖွငျ့ ရရှိလာမယျ့ အကြိုးကြေးဇူးမြား
နှားနို့ပူပူထဲ ကွကျသှနျဖွူထညျ့ပွီင်္း သောကျကွညျ့ဖူးပါသလား? အနညျးငယျ ထူးဆနျးမယျလို့ ထငျပမေယျ့ ဒီနညျးဟာ ရောဂါဘယတှေ ကငျးဝဖေို့ ရှေးနှဈပေါငျးမြားစှာက ကငျြ့သုံးခဲ့တဲ့နညျး လမျးတဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။ပရိုတငျးဓာတျ ပွညျ့ဝတဲ့ နှားနို့နဲ့ ရောဂါတှကေို တှနျးလှနျနိုငျတဲ့ ကွကျ သှနျဖွူတို့ တှတေဲ့ အခါ အဆုတျရောငျ၊ ပနျးနာရငျကပျြ၊ နှလုံးရောဂါ၊ အသားဝါ၊ အဆဈရောငျ၊ ခြောငျးဆိုးနဲ့ တီဘီရောဂါတှကေို ပြောကျကငျးစနေိုငျပါတယျ။
ညဘကျ အိပျမပြျောတဲ့အခါ နှားနို့ ပူပူကို ကွကျသှနျဖွူလေးနဲ့ သောကျပေးရငျ ကောငျးကောငျး အိပျပြျောစနေိုငျပါတယျ။ ကွကျ သှနျဖွူ ဟာ ရောဂါပိုးတှကေို သစေနေိုငျပွီး အစာခွစေနဈကို မွငျ့တငျပေးတဲ့ အတှကျ အစာခွေ ဖကျြအားကို ကောငျးမှနျစပေါတယျ။ အစာအိမျနဲ့ အူမကွီးအတှကျတော့ ကောငျးမှနျတဲ့ ဓာတျစာ တဈမြိုးပါ။ ဒါ့အပွငျ ကလေးလိုခငျြတဲ့ အိမျထောငျရှငျတှေ အနနေဲ့ အမြိုးသားရော အမြိုးသမီးပါ သောကျပေးသငျ့ပါတယျ။
မြိုးပှားကနျြးမာရေးကို အထောကျအကူ ပေးနိုငျပါတယျ။ ကွကျသှနျဖွူ နှားနို့ကို တဈပတျကြျော ကြျော ဆကျတိုကျသောကျပေးမယျဆိုရငျ ကိုယျခန်ဓာထဲမှာ ရှိတဲ့ မကောငျးတဲ့ အဆီတှကေို ခပြေးနိုငျပွီး ကိုယျအလေးခြိနျ ကသြှားစနေိုငျပါတယျ။ပွုလုပျပုံ – ကွကျသှနျဖွူနှားနို့ ပွုလုပျရာမှာ အဓိက လိုအပျတာတှကေတော့နှားနို့၊ ကွကျသှနျဖွူ ၁၀မှာ၊ ရေ၊ သကွား – ၂ဇှနျး။ကွကျ သှနျဖွူ တှကေို နုတျနုတျစငျးထားပါ။ ကြိုမယျ့ ဒယျအိုးထဲကို ရနေဲ့ရောစပျပွီးသား နှားနို့ အရငျထညျ့ပါ။ ကွကျသှနျဖွူတှကေို ထညျ့ပါ။ တဈဝကျလောကျ ကသြှားတဲ့ အထိ ကြိုပေးပါ။ ပဈြလာတဲ့အခြိနျ မှာတော့ မီးပိတျပွီး ခဏ အအေးခံပွီး သောကျလို့ ရပါပွီ။
နွားနို့ထဲ ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပြီး သောက်သုံးပေးခြင်းဖြင့် ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ
နွားနို့ပူပူထဲ ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပြီင်္း သောက်ကြည့်ဖူးပါသလား? အနည်းငယ် ထူးဆန်းမယ်လို့ ထင်ပေမယ့် ဒီနည်းဟာ ရောဂါဘယတွေ ကင်းဝေဖို့ ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာက ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့နည်း လမ်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ပရိုတင်းဓာတ် ပြည့်ဝတဲ့ နွားနို့နဲ့ ရောဂါတွေကို တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ ကြက် သွန်ဖြူတို့ တွေ့တဲ့ အခါ အဆုတ်ရောင်၊ ပန်းနာရင်ကျပ်၊ နှလုံးရောဂါ၊ အသားဝါ၊ အဆစ်ရောင်၊ ချောင်းဆိုးနဲ့ တီဘီရောဂါတွေကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။
ညဘက် အိပ်မပျော်တဲ့အခါ နွားနို့ ပူပူကို ကြက်သွန်ဖြူလေးနဲ့ သောက်ပေးရင် ကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်စေနိုင်ပါတယ်။ ကြက် သွန်ဖြူ ဟာ ရောဂါပိုးတွေကို သေစေနိုင်ပြီး အစာခြေစနစ်ကို မြင့်တင်ပေးတဲ့ အတွက် အစာခြေ ဖျက်အားကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ အစာအိမ်နဲ့ အူမကြီးအတွက်တော့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဓာတ်စာ တစ်မျိုးပါ။ ဒါ့အပြင် ကလေးလိုချင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်တွေ အနေနဲ့ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။
မျိုးပွားကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူ နွားနို့ကို တစ်ပတ်ကျော် ကျော် ဆက်တိုက်သောက်ပေးမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ ရှိတဲ့ မကောင်းတဲ့ အဆီတွေကို ချပေးနိုင်ပြီး ကိုယ်အလေးချိန် ကျသွားစေနိုင်ပါတယ်။ပြုလုပ်ပုံ – ကြက်သွန်ဖြူနွားနို့ ပြုလုပ်ရာမှာ အဓိက လိုအပ်တာတွေကတော့နွားနို့၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၁၀မွှာ၊ ရေ၊ သကြား – ၂ဇွန်း။ကြက် သွန်ဖြူ တွေကို နုတ်နုတ်စင်းထားပါ။ ကျိုမယ့် ဒယ်အိုးထဲကို ရေနဲ့ရောစပ်ပြီးသား နွားနို့ အရင်ထည့်ပါ။ ကြက်သွန်ဖြူတွေကို ထည့်ပါ။ တစ်ဝက်လောက် ကျသွားတဲ့ အထိ ကျိုပေးပါ။ ပျစ်လာတဲ့အချိန် မှာတော့ မီးပိတ်ပြီး ခဏ အအေးခံပြီး သောက်လို့ ရပါပြီ။
Previous Article လူထုလှုပျရှားမှုမြားမှာ တကျကွှစှာပါဝငျနကွေသကဲ့သို့ ကနျြးမာရေးအတှကျလညျး အထူးဂရုစိုကျသငျ့ကွောငျး အသိပေးလာတဲ့ မငျးမျောကှနျး
Next Article မွနျမာလူမြိုးတှအေတှကျ ပါဝငျအားဖွညျ့ပေးလိုကျ တဲ့ ကို ရီး ယားအဆိုတျောကွီးမြား